China 5XZC-7.5DS Seed Cleaner & Grader vagadziri nevatengesi | SYNMEC
Mbeu yekuchenesa & giredhi inoshandiswa kuchenesa nekuisa magiredhi mhodzi, zviyo, zviyo, uye zvimwe zvigadzirwa zvegranule.
Iyo 5XZC-7.5DS ine double air seed cleaner inonyanya kugadzirwa kuti ibvise 100% chiedza chetsvina seganda rebran, huruva, inosiya masanzu eguruva reGRAIN, zvinhu zvikuru nezvidiki zvekune dzimwe nyika .Kukwanisa kwemuchenesi wembeu iyi i7.5 mt paawa yeGRIN mbeu .Kwete chete yakakodzera kambani yekugadzira mbeu, yakakodzerawo murimi akazvimiririra kugadzirisa uye kuchenesa GRAIN .teff seed cleaning machine.
Yese guruva nekusachena kwakareruka kunogona kubviswa neaspirator fan. Mbeu yezviyo inowira pamitsetse yesefa uye yakaparadzaniswa nemasefa zvichienderana nehupamhi uye kusiyana kweukobvu. Hutsvina hwese hombe nesamll hwakaburitswa muzvitoro zvakasiyana.
Zviyo zvinowira mubhokisi rekupinza zviyo mushure mekusefa kwemhepo, uyezve pasi pekuzunguzika tsanga ichisvetuka uye ichiyerera ichienda kune yakawanda-layer sieving hunde, ichitevera tsanga dzakanyatso kuenzana pinda kune yepamusoro layer sieve kuburikidza nerabha keteni. Mbeu dzakasarudzwa dzinowira mune inotevera yakaderera sieving panel mushure mekusefa, hundi nemarara zvakavharwa nemasefa uye zvichiendeswa kune chekubuda kwetsvina yakakura. Mbeu dzakasarudzwa dzichawira muzvikamu zvepasi sieving panels, uye dzichaiswa mumatanho akasiyana-siyana ezviyo zvakasiyana-siyana nekusefa muzvikamu zvakasiyana-siyana zvekusefa, izvo zvinokonzerwa nemashizha ekusefa ane hukuru hwakasiyana. Mbeu dzakasarudzwa dzinoyerera dzichienda kunzvimbo dzezviyo zvakanaka, zadzisa mubhegi rakarembera pamubati webhegi. Cap yezvitoro inogona kushandiswa kana uchichinja bhegi zvinoreva kuti cap inogona kuva pedyo kana iwe uchichinja bhegi. Ndiko kuyerera kwese kwese kwemuparadzanisa.
Shandisa sefa yakasiyana kune nzira dzakasiyana dzemhando dzakasiyana dzezviyo. Mahwindo ekutarisa ari pahunde yekusefa ndeyekutarisa kushanda.
Aspiration Chamber (Wind Sieve)
Kubvisa huruva, mashanga, hei, goko uye kumwe kusachena kwakareruka kubva muzviyo.
Bata uye mapfundo anogadzirisa gap rechiteshi (yakafara kumusoro uye yakamanikana pazasi) kuti uwane yakakwana yekuparadzanisa mhedzisiro. Kubviswa kwese kwehuremu huremu kusachena apo mhodzi yakanaka inodonha pasi.
Dust cyclone separator inyanzvi nzira yekubvisa zvimedu kubva mumhepo, gasi kana rwizi rwemvura, pasina kushandisa mafirita.
Mhedzisiro inotenderera uye simba rinokwevera zvinhu pasi rinoshandiswa kupatsanura musanganiswa wezvakaoma uye zvinwiwa.
Mhepo yekukiyiwa inoburitsa kusvibiswa kubva kune guruva cyclone separator uye chengetedza mhepo yekumanikidza yeaspiration system
Zviyo zvinosimudzwa nemugomo zvinowira mubhokisi rekuparadzira zviyo, umo zviyo zvinoyerera zvakaenzana, kana zviyo zvaunganidzwa kune rimwe divi. Mushure meiyo tsanga inowira muhunde yekusefa uye kusachena kwakareruka kwakabviswa nekushuvira panguva imwe chete.
Zviyo zvakapararira zvinodya muhunde yekusefa kuti zviparadzanise. Muchikamu chino, zviyo / mhodzi yakagadziridzwa nepepa re galvanize rine maburi akasiyana mune yega yega. Saizi yakakura uye diki saizi tsvina yakaraswa muzvitoro zvakasiyana zvakateerana. Mbeu yekupedzisira yakacheneswa inobuda mudura guru.
Kaviri mhepo yekuchenesa system
Kaviri mhepo yekusveta pombi, kuwedzera kuchenesa mashandiro,
Kusveta kusvibiswa kwakareruka uye guruva, kuchaita kuti zviyo zviwedzere
Nyeredzi chimiro Bata
Yakagadzirisa masefa, mashefu anogona
Zviri nyore kudhonza masefa kunze. Mutengi anogona kushandura sefa zviri nyore pakuchenesa zvimwe zviyo kana mbeu.
Masefa ari mukati akagadzirwa nesimbi yakasimba. Isu tichashongedza akakodzera sieves gomba zvinoenderana nemutengi's raw material.
Kuti usarudze masefa akakwana, sampuli yembeu (raw material ine tsvina) kana foto yekuyera mhodzi inodiwa mushure mekunge vatengi vaodha. Ziva kuti seti imwe chete yakashongedzerwa seyakajairwa, inongoshandiswa kune imwe mhando yembeu.
Cherechedza: Stainless simbi sieve inowanikwa.
Inoshandiswa kutamisa zvinhu (zviyo). Inowanikwa mune zvese zvakagadziriswa uye zvinofambiswa vhezheni kugadzirisa akasiyana nharaunda yekushanda.
Iyo ine compact chimiro, mushandisi ane hushamwari interface, nyore kuchengetedza, kuchengetedza simba, nyore kuchenesa, zvinobudirira kudzivirira musanganiswa.
Iyo ine chimiro chekushanda nyore, inongoda chete
batanidza simba. Iyo waya ndeye 100% mhangura,
inovimbisa huwandu hwepamusoro uye hurefu hwekushandisa hupenyu.
Isu takaisa iyo tractive mutoro furemu uye vhiri, saka iwe unogona kuishandisa mumusha.
Dimension yemasefa 1250*2400mm
Kugona (kuverenga negorosi) 7.5t/h
Kurema 1.77 tani
Zvakapfuura: 5XZC-15 Muchenesa Mbeu & Grader
Zvinotevera: 5XZC-5DH Muchenesa Mbeu & Grader
5PJ-5 bhinzi yekupukuta muchina /soyabhinzi mung bhinzi...
5XP-S Drum Type Pre-Cleaner mbeu isati yacheneswa m...